Marihina fa misy “Couloir de vaccination” eny an-toerana. Mivezivezy ny vola eny an-tsenan'Ankilipisikina satria mba maka ny tandrify azy koa ireo mpivarotra hanimasaka sy zava-pisotro ho an'ny rehetra mandritra ny tsena.
Volana vitsivitsy izay dia tsy latsaky ny 500 ireo omby mandalo amin’ity tsena ity. Misy koa avy eo ny fikarakarana ny taratasin’omby eny amin’ny biraon’ny Distrika ahafahan'izy ireny ho entina hamidy any Tsiroanomandidy.
Anisan'ny kitro ifaharan'ny toekarenan'ny Distrikan’Antsalova ny omby satria ankoatry ny vola azon'ireo mpiompy amin’ny varotra izay ataony dia mba mahazo ny anjarany koa ireo mpivarotra isan-karazany toy ny sakafo, hotely fandraisam-bahiny, toerana fisotroana sns.
Sambava : Promotion de l’agriculture biologique
Secteur vanille : Les productions en réel danger »
mercredi, 15 novembre 2017 03:54
mardi, 14 novembre 2017 19:03
mardi, 14 novembre 2017 09:19
mardi, 14 novembre 2017 03:29
lundi, 13 novembre 2017 13:17
lundi, 13 novembre 2017 12:04
lundi, 13 novembre 2017 01:35
dimanche, 12 novembre 2017 19:16
dimanche, 12 novembre 2017 17:03
dimanche, 12 novembre 2017 11:04